ရှင်းလင်းချက် | CUNMAC Vietnam
1. ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အောက်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။ CUNMAC သည် သင့်အား အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤအသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်၏ ဧရိယာများတွင် တင်ထားသော အသုံးပြုမှု စည်းကမ်းချက်များ မတူညီနိုင်ပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ သီးခြားဧရိယာတစ်ခုအတွက် အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ပို့စ်တင်ထားသောအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကြားတွင် ကွဲလွဲမှုများရှိနေပါက၊ တင်ထားသောအသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များသည် အဆိုပါဝဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုထက် သာလွန်ပါမည်။
2. CUNMAC သည် Website မှ အကြောင်းအရာ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူ၏ ကွန်ပျူတာစနစ် ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာ ဆုံးရှုံးခြင်းများအတွက် တာ၀န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ CUNMAC သည် ဝဘ်ဆိုက်၏ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အင်္ဂါရပ်များ အပါအဝင် ဝဘ်ဆိုက်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင် သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ CUNMAC သည် ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့သောပြောင်းလဲမှုများသည် အသိပေးချက်ချင်းထိရောက်ပြီး ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ပါမည်။
3. မည်သည့်အခြေအနေတွင်မှ CUNMAC သည် CUNMAC ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အမြတ်အစွန်းဆုံးရှုံးခြင်းအပါအဝင် (အမြတ်အစွန်းဆုံးရှုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးခြင်းအပါအဝင်) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာ၀န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ပေးထားသော အချက်အလက်။
4. Site သည် ဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များနှင့် အသုံးပြုသူများ၊ ကြော်ငြာသူများ၊ လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ဝဘ်ဆိုက်၏ စပွန်ဆာများ အပါအဝင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ အကြောင်းအရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပေးပါသည်။ CUNMAC သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝဘ်ဆိုက်များတွင် ပေးထားသည့် ရရှိနိုင်မှုနှင့် အကြောင်းအရာများအတွက် တာဝန်မရှိကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကိုအသုံးမပြုမီ အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝဘ်ဆိုက်များနှင့် အကြောင်းအရာများမှတင်ထားသောမူဝါဒများကို ဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ CUNMAC သည် ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ အကြံဉာဏ်များ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် ကြော်ငြာများအပါအဝင် ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာအတွက် တာဝန်မရှိပါ၊ အသုံးပြုသူသည် အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အန္တရာယ်အားလုံးကို ခံရပါသည်။ CUNMAC သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အသုံးပြုသူ ခံစားရနိုင်သည့် မည်သည့်အရာ၏ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက်မဆို တာဝန်မရှိပါ။